blogs ဖွင့်တိုင်း I UNDERSTAND AND I WISH TO CONTINUE နှင့် comments ပေးတိုင်း ပေါ်နေသောစာလုံးဖျက်ကို မပေါ်စေချင်ရင် - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
blogs ဖွင့်တိုင်း I UNDERSTAND AND I WISH TO CONTINUE နှင့် comments ပေးတိုင်း ပေါ်နေသောစာလုံးဖျက်ကို မပေါ်စေချင်ရင်
blogs ဖွင့်တိုင်း I UNDERSTAND AND I WISH TO CONTINUE နှင့် comments ပေးတိုင်း စာလုံးဖျက်ကို မပေါ်စေချင်ရင် အောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်းပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါ ။ မိမိ ဘလော့ဖွင့်တိုင်း I UNDERSTAND AND I WISH TO CONTINUE I do not wish to continue message လေးပေါ်ပေါ် နေတာဟာ
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ကြားတဲ့ တော်တော် နှောင့်အယှတ်ဖြတ်စေပါတယ် ၊ ထို့ အတူ Comments ပေးတိုင်း စာလုံးဖျက် ကိုရေးမှ Comments ပေးလို့ ရတာဟာလဲ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ အချိန်မှာ အခက်ခဲတွေ့ စေပါတယ် ။ ကျွန်တော့် အမြင်မှာတော့ ဒါတွေ ဟာအပိုအလုပ်တွေလို့ ပဲမြင်ပါတယ် ၊ အဲလို အရုပ်ဇယားတွေကို ဖျက်ပစ်ဖို့ ကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ ။
UNDERSTAND AND I WISH TO CONTINUE I do not wish to continue message ဖျက်ရန်အတွက်
၁ . settings
၂ . Basic
၃ . Adult Content? မှာ Yes နေ ရာမှာ No လုပ်ပေးပါ ။
ပြီးရင် Save လိုက်ပါ ။ ဒါဆိုရင် သင့်ဘလော့ဖွင့်တိုင်း UNDERSTAND AND I WISH TO CONTINUE I do not wish to continue message ပေါ်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး ။
Comments ပေးတိုင်း စာလုံးဖျက်ပေါ်နေတာလေးကိုဖြုတ်ချင်ရင်
၃. Show word verification for comments? နေရာမှာ Yes နေရာကို NO နေရာသို့ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ။
ပြီးရင် Save ပေါ့ ။
ဒါဆိုရင် သင့်ဘလော့မှာ Comments ပေးတိုင်းပေါ်လာတတ်တဲ့ စာလုံးဖျက်လေးပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့သလို Comments ပေးသူများအနေနှင့်လဲ ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါတယ် ။
မှတ်ချက် ။ ။ သိပြီးသူများအတွက်လုံးဝမရည်ရွယ်ပါ ။